Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A2 - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Injection ကိုများအတွက်ဟော်မုန်း A2 ဖြင့်ထုတ်လွှ Luteinizing ဟော်မုန်း (LHRH-A2) ဤကော်ပိုရေးရှင်း Luteinizing ဟော်မုန်းဟော်မုန်း A2 ဖြင့်ထုတ်လွှများအတွက်ကုန်ကြမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အိမ်မှာ GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်တော်မူပြီးမှတစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်အဖြူအေးခဲ-အခြောက်လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်အမှုန့်သည်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] Polypeptide ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), သားအိမ် follicles ၏မထွက်ရရင့်ကျက် secrete ဖို့တိရိစ္ဆာန် anterior pituitary မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် ...
L ကို uteinizing H ကို ormone R ကို eleasing H ကို ormone တစ်ဦးက2Injection ကိုများအတွက် (LHRH-တစ်ဦးက2)
ဒါက ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူ လွန်တော်မူပြီးမှ GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အိမ်မှာ in terms of the raw materials for Luteinizing H ကို ormone R ကို eleasing H ကို ormone s တစ်ဦးက 2.
Polypeptide ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ ဒါဟာ luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှင့်သားအိမ် follicles ၏ရင့်ကျက်ဒီနည်းနဲ့မျိုးဥထွက်မှရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရ follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), secrete ဖို့တိရိစ္ဆာန် anterior pituitary မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏမျိုးဥထွက် hysteresis, မလှုပ်မရှားသားဥအိမ်, မြဲ Corpus luteum နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းနွားများအတွက်သားအိမ် cyst ကုသပေးဖို့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအထီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ spermatogenesis မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
1. မျိုးဥထွက် hysteresis: သုက်အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်25-50μg၏အသားထိုးဆေး။
2. အလုပ်မလုပ်သားဥအိမ်: 25μg, တစ်ချိန်ကနေ့, က3ရက်ဆက်တိုက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးစုစုပေါင်းထိုး75μgကျော်မဖြစ်ရလိမ့်မည် မည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားအိမ် follicles လည်းမရှိတဲ့အခါမှသာယေဘုယျအားဖြင့်, အကြိုးသကျရောပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
3. သားအိမ် cyst: 25μg, တစ်ချိန်ကနေ့, က 3-4 ရက်ဆက်တိုက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးစုစုပေါင်းထိုး100μgကျော်လွတ်လိမ့်မည်။
10 ×25μg 10 ×50μg 10 ×125μg
ယခင်: Injection ကိုများအတွက် gonadotropin (GnRH)
နောက်တစ်ခု: Injection ကို bovine & က်ဘို့ LHRH-A3
Lhrh-A2 Injection ကို bovine & က်သည်
testosterone Propionate Injection (အန်ဒရိုဂျင်)